Professional ရွေ့လျားနိုင်သော / နောက်တွဲအမျိုးအစားအမျိုးအစားဒီဇယ်မီးစက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်စက်ရုံတိုက်ရိုက် | မင်းကြိုက်
ရွေ့လျားနိုင်သော / နောက်တွဲအမျိုးအစားဒီဇယ်မီးစက်သတ်မှတ်
နောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစား၏မီးစက်အစုံကိုလက်ဖြင့်မောင်းနှင်သည့်မော်တော်ယာဉ်တပ်ဆင်ထားသည့်မီးစက်၊ သုံးဘီးဆိုင်ကယ်မီးစက်၊ ဘီးလေးမီးစက်၊ မော်တော်ယာဉ်စွမ်းအားသုံးဓာတ်အားပေးရုံ၊ နောက်တွဲယာဉ်ပါဝါဘူတာ၊ အင်ဂျင်နီယာမော်တော်ယာဉ်, etc
ဆွဲဆောင်မှု: ရွေ့လျားချိတ်, 180 ° turntable, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်စတီယာရင်, မောင်းနှင်မှုအတွက်လုံခြုံမှုကိုသေချာချမှတ်ပါ။
ဘရိတ် - မောင်းနှင်နေစဉ်လုံခြုံမှုရှိစေရန်လေဘရိတ်မျက်နှာပြင်နှင့်လက်ဖြင့်ဘရိတ်စနစ်ရှိသည်။
၁။ သိသာနိမ့်သောဆူညံသံစွမ်းဆောင်ရည်၊ မီးစက်ဆူညံသံကန့်သတ်ချက် 75dB (A) (ယူနစ်မှ ၁ မီတာ) ကွာဝေးသည်။
၂။ ယူနစ်၏အလုံးစုံဒီဇိုင်းသည်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသည်၊ သေးငယ်သည်၊ ဝတ္ထုနှင့်လှပသည်။
၃။ အလွှာစုံသောအကာအကွယ် impedance သည်မလုံလောက်သောအသံကာကွယ်မှုအဖုံး။
5. အကြီးစား impedance ပေါင်းစပ်တိတ်ဆိတ်။
6. အကြီးစားစွမ်းရည်လောင်စာဆီ burner ။
လွယ်ကူသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် ၇။ အထူးလျင်မြန်သောအဖွင့်အဖုံး
"မလည်ပတ်ပါနှင့်" သို့မဟုတ်အလားတူသတိပေးဆိုင်းဘုတ်များကိုမီးစက်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်မီ start switch သို့မဟုတ် lever မှဆွဲထားသင့်သည်။
မီးစက်တပ်ဆင်ထားစဉ်သို့မဟုတ်ပြုပြင်နေစဉ်အင်ဂျင်နားတွင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ၀ န်ထမ်းများအားခွင့်မပြုပါနှင့်။
မီးစက်၏ထိန်းချုပ်နေရာမှအရေးပေါ်ရပ်တန့်ရေးခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ ဂျင်နရေတာထွက်ရှိသောခလုတ်သည် OFF (OFF) အနေအထားတွင်ရှိသင့်သည်။
အကြားအာရုံပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်အင်ဂျင်ကိုတံဆိပ်ခတ်ထားသောနေရာတွင်လည်ပတ်ပါကနားကိုကာကွယ်ပါ။ ၀ တ်စုံနှင့်အခြားအင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းများနှင့် တွဲဖက်၍ အလုပ်လုပ်နိုင်သောအလွန်ကြီးသောအကာအကွယ်အဝတ်အစားများနှင့်လက်ဝတ်ရတနာများကိုမဝတ်ပါနှင့်။
အင်ဂျင်ပေါ်တွင်ဒိုင်းလွှားများသို့မဟုတ်ပါးပျဉ်းအားလုံးရှိထားကြောင်းသေချာပါစေ။ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းအားလုံးကိုသုံးသောအခါဂရုပြုပါ။ ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာများပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နိုင်သောကြောင့်ဖန်ခွက်ကွန်တိန်နာများတွင်ပြုပြင်ထိမ်းသိမ်းမှုဖြေရှင်းချက်များကိုမသိုလှောင်ပါနှင့်။
(၁) ဘက်ထရီသိမ်းဆည်းရန်အချိန်သည် (၃) လကျော်ပြီး၊ အားသွင်းချိန်သည် (၈) နာရီဖြစ်သည်။ (၂) ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်သည် (၃၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် (၈၆ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်) ကျော်လွန်သည်သို့မဟုတ်ဆွေမျိုးစိုထိုင်းမှုသည် ၈၀% ကျော်ပြီးကြာချိန်သည် ၈ နာရီဖြစ်သည်။
(၃) ဘက်ထရီသိုလှောင်ရန်အချိန် ၁ နှစ်ကျော်ပါကအားသွင်းချိန်သည် ၁၂ နာရီဖြစ်နိုင်သည်။
(4) အားသွင်းလိုင်းရဲ့အဆုံးမှာ, Electrolyte တွေ၏အရည်အဆင့်လုံလောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေး, လိုအပ်သောအခါမှန်ကန်သောတိကျတဲ့ဆွဲငင်အား (1: 1.28) နှင့်အတူစံ Electrolyte တွေကိုထည့်ပါ။
ဘက်ထရီကိုအားသွင်းနေစဉ်၊ ဦး စွာ filter cap သို့မဟုတ် vent cap cap ကိုဖွင့်ပါ။ electrolyte level ကိုစစ်ဆေးပါ၊ လိုအပ်ပါကရေစက်နှင့်ညှိပါ။ ထို့အပြင်ဘက်ထရီဆဲလ်ညစ်ညမ်းမှုဓာတ်ငွေ့ကိုရေရှည်ပိတ်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ရန် အချိန်မီဆေးကြောခြင်းနှင့်ဆဲလ်ထိပ်နံရံ၏အတွင်းပိုင်းအပေါ်ရေမျက်ရည်စက်လေးတွေပိတ်ဆို့ခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်, လေသင့်လျော်သောလည်ပတ်မှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်အထူးလေဝင်လေထွက်ဖွင့်လှစ်ရန်အာရုံစိုက်ရပါမည်။
ရှေ့သို့ 5kw ဂဟေဒီဇယ်မီးစက် set
နောက်တစ်ခု: 15kva-500kva ပွင့်လင်း။ အသံတိတ်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်စက်
ရွေ့လျားနိုင်သော / နောက်တွဲအမျိုးအစားဒီဇယ်မီးစက်အမျိုးအစား
ဗို့အား 220 / 380V, 230 / 400V, 110 / 220V, 240 / 415V, 254 / 440V, 277 / 480V
အင်ဂျင် , Perkins, Doosan, Wandi, Kubota, Yanmar, Isuzu စသည်တို့နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
Alternative Leroy somer, Stamford, Marathon, etc
Controller Deepsea, Comap, Smartgen စသည်တို့ဖြစ်သည်။
တိုက်နယ်အနိုင်အထက် ABB / Schneider, etc ။
အမျိုးအစား ပွင့်လင်း / အသံတိတ်
ဆီဘူး ထိပ်တန်း tank, Base Tank, ပြင်ပနေ့စဉ်လောင်စာဆီ tank
optional ကိုထောက်ပံ့ထုတ်ကုန် ရွေ့လျားနိုင်သော / နောက်တွဲယာဉ်အမျိုးအစားဒီဇယ်မီးစက် / ထပ်တူပြုစနစ်စနစ်အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းခလုတ် / Dummy Load Day Tank
၁။ အင်ဂျင် အသစ်စက်စက်အင်ဂျင်။
၂ ။ အသစ်စက်စက် brushless alternator တစ်ခုတည်း bearing, IP23, H ကို insulator တွင်လည်းလူတန်းစား။
၃ ။ အကြီးစားတာဝန်သံမဏိရုပ်သံလိုင်းအခြေစိုက်စခန်းဘောင်။
၄။ ရေတိုင်ကီ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစောင့်။
5. တုန်ခါမှု Damper အင်ဂျင် / Alternator နှင့်အခြေခံဘောင်အကြားတုန်ခါမှု Damper
၆ ။ စံအဖြစ် 3-pole output ကို manual circuit ကိုအနိုင်အထက်, option ကို4ထမ်းဘိုး
၇ ။ Deepsea မော်ဒယ်များ၊ Comap သို့မဟုတ် Smartgen စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၈ ။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖိုနှင့်အတူအကြီးစားတာဝန်စက်မှုဇုန်အသံတိတ်အသံ။
၉။ ဘက်ထရီ Varta အမှတ်တံဆိပ်၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီကေဘယ် / w ထိန်းသိမ်းခြင်းအခမဲ့ဘက်ထရီ
၁၀။ ဆီဘူး 8 နာရီအခြေစိုက်စခန်းလောင်စာဆီတိုင်ကီသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်
၁၁။ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်လက်စွဲများ - Generator / Engine / Alternator / control panel စသည်တို့အတွက်စံသတ်မှတ်ထားသောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှု၊
5kw ဂဟေဒီဇယ်မီးစက် set
10-1000kva Open Frame အမျိုးအစားဒီဇယ်စွမ်းအင်သုံး ...
5kw ပွင့်လင်း / တိတ်ဆိတ်စွာလေအအေးဒီဇယ်မီးစက် set ကို
15kva-500kva ပွင့်လင်း။ အသံတိတ်သောသဘာဝဓာတ်ငွေ့ထုတ်လုပ်စက်